Mazhinji emalaptop anotakurika anowanikwa mazuva ano muzvitoro ari ma2-in-1s, kana anotendeuka, zvinoreva kuti anosanganisira anotenderera / anokwanisa kutariswa sikirini yekubata uye inogona kushandiswa semabhuku enguva dzose, semapiritsi, kana chimwe chinhu chiri pakati.
Muna 2016, maLaptop anozivikanwa-2-in-1 haasi mashoma uye akareruka, asi zvakare ane simba rakaringana kubata mabasa ezuva nezuva, anogona kugara kwemaawa matanhatu kusvika gumi ekushandisa pamutero mumwe chete uye kazhinji anotengeswa nemari iri pasi pe $ 6, kunze kwekushoma.
Iyi posvo inounganidza akanakisa 2-in-1 ultraportable iwe aunogona kuwana izvozvi (zvinyorwa zvitsva zvinowedzerwa nguva dzose), uye sezvo kupihwa kuri kukuru, chinyorwa rakakamurwa kuita zvikamu zvikuru zvitatu:
pfupiso yekukurumidza ye sarudzo nhatu dzakanakisa dziripo izvozvi;
chikamu chakadzama pa iyo yekutanga 2-in-1 ultrabooks, sarudzo kune avo vauri kutsvaga akanakisa maficha uye hunhu;
uye imwe pamusoro mahybrids anodhura zvakanyanya, sarudzo dzakakodzerwa nevatengi vane tarisiro yebhajeti pakati pako.
Iwo akanakisa 2-in-1 malaptop anotakurika
Sarudzo yekutanga - Mushure mekuongorora mazhinji e2-in-1s anowanikwa muzvitoro, tinogumisa kuti YAKANAKA 2-in-1 inotakurika laptop yaunogona kutenga mazuva ano ndiyo HP Spectre x360 13.
Ramba uchifunga kuti sekunonoka-2016 pane yakagadziridzwa modhi, diki, yakatetepa uye yakavakirwa paIntel Kaby Lake Hardware. Iyi vhezheni inorema 2.85 lbs, iri 0.54 ″ gobvu, rakagadzirwa zvachose nealuminium uye iri compact ye13-incher, sezvaunogona kutaura kubva kune slim lateral bezels pachiratidziri. Kunyangwe iri mutete silhouette, inoiswa mota neCore U chikuva ine yekukurumidza SSD kuchengetedza, inorongedza 58 Wh bhatiri uye yakanakisa backlit keyboard. IO inenge isina kukwana asi, asi iwe uchiri kuwana maviri maThunderbolt 3 madoko pamativi uye yakazara-saizi USB 3.0 slot.
Iyo yapfuura X360 13 inorema zvishoma, inorema kutenderedza 3.3 lbs, uye inoshaya chiteshi cheThunderbolt 3, asi kune rimwe divi inosanganisira digitizer uye inoshanda peni rutsigiro, iyo isina modhi nyowani. Iyo yekare Skylake vhezheni zvakare inodhura kupfuura iyo nyowani modhi, sezvo iwe ungazoiwana yakadzikiswa munzvimbo dzinoverengeka.
Iyo nyowani Specter X360 13 inotanga kutenderedza $ 1050 yeakanakisa-kutenga kumisikidzwa neCore i5 processor, 8 GB ye RAM uye 256 GB. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye nemitengo yakagadziridzwa pane ese Specters. Iwe zvakare uchawana zvimwe nezve iyo 2016 vhezheni kubva pakuongorora kwedu kwakadzama, kana iwe unogona kuverenga nezve yapfuura Specter x360 13 mune ino ongororo.
azvino madhiri pane iyo HP Specter x360 13
Iyo HP Specter X360 ndiyo yakanakisa 2-in-1 ultraportable yenguva yacho
Sarudzo yechipiri - kana iwe usina $ 1000 yekushandisa pane isingachinjike 2-in-1, saka unofanirwa kutarisa iyo Asus Zenbook UX360CA panzvimbo.
Iyi yakapfava uye yakavakwa zvakanaka, inorema 2.9 lbs, inowana yakanaka keyboard (isina kudzoreredzwa kunyangwe) uye yakasimba kwazvo dhizaini yemutengo, ine Core M Skylake kana Kaby Lake processor, 8 GB ye RAM, 512 GB yeSSD nzvimbo yekuchengetera uye 54 Wh bhatiri rinotengesa kwakatenderedza $ 800. Mavhezheni ane chete 256 GB yekuchengetera nzvimbo tengesa madhora zana zvishoma, uye iwe unogona tevera iyi link kune rumwe ruzivo, mushandisi wongororo uye zvazvino zvibvumirano pane ichi chigadzirwa
Pane zvinhu zvishoma zvaunofanirwa kuziva nezve iyo Core m chikuva hazvo. Kutanga, haina fan, saka hapana fan mukati mekomputa iyi, zvinoreva kuti ichatiza yakafa yakanyarara. Uye chechipiri, nepo ichikurumidza zvakakwana kushandiswa kwezuva nezuva uye kumwe kuita kwakawanda, haina kufanana neiyo Core i3, i5 uye i7 mapurosesa anowanikwa pane mamwe akawanda zvigadzirwa. Saka iwe unofanirwa kungotora iyo Core M komputa kana iwe uri wepakati mushandisi ane avhareji zvido: kubhurawuza, hofisi kushandisa, mimhanzi, mavhidhiyo, nezvimwe
Chechitatu Sarudzo - Kana iwe uchitsvaga imwe inotakurika sarudzo uye unotarisira kushandisa chishandiso kazhinji sehwendefa, iyo Microsoft Surface Pro 4 ndeyako iwe.
Iyo Hardware uye bhatiri zvakasungirirwa kuseri kwechidzitiro pane ino. Inorema anenge 1.75 lbs uye ingori 0.33 ″ gobvu, saka inotakurika zvakanyanya kupfuura dzimwe sarudzo kunze uko, asi ichiri yakanyatsovakwa.
Iyo Surface Pro 4 inowana Intel Skylake Core U Hardware, senge iyo HP Specter X360 uye mazhinji mamwe maabooks, inogona kuenda kwemaawa manomwe kusvika masere ekushandisa pamubhadharo uye inopa yakanakisa 7-inch kuratidza ine digitizer uye peni rutsigiro. Iyo Surface Pro 8 inogona zvakare kuve yakanaka yakanaka laptop. Kuti uwane iyo-yakafanana neruzivo rwepafoni iwe unofanirwa kusungira iyo slate kumusoro kune iyo keyboard folio, ine backlit makiyi uye inehunhu trackpad. Iyo inonyatso kunyora zvakanaka uye iyo Surface inoita zvakanaka mune iyi fomu sekureba sekunge iwe uchizvichengeta pane yakati sandara pamusoro, asi inoshaya iyo inogona kubatika uye iyo IO yebhuku rakajairwa.
Pamusoro pezvo, iyo Surface Pro 4 iri nani mutengo, iine basic Core i3 kumisikidzwa kutanga pa $ 999 yehwendefa roga, isina iyo keyboard keyboard, inozokudzosera imwezve $ 130. Chinyoreso chakabatanidzwa. Iyo isina faniro Core m3 kumisikidza inowanikwawo mukati mako uri kutsvaga chengetedza imwezve $ 100, asi mikana iwe ungangowana zvese izvi optiosn yakadzikiswa panguva yauri kuverenga izvi. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye yakagadziridzwa mitengo uye kumisikidzwa.
madhiri ekupedzisira pane iyo Surface Pro 4
Iyo Surface Pro 4 inopfuura sehwendefa, asi haisi chaizvo iyo laptop inonzi neMicrosoft inogona kudaro
Bang-for-the-buck Sarudzo - Kana iwe uchida kuwana yakazara-saizi multimedia komputa ine 15-inch inoshanduka skrini, yakasimba specs uye mutengo unodhura tag, iyo Asus Vivobook Flip TP501UB / Q553UB ndiyo yako.
Unogona kunetseka kuti uwane muchina uyu, sezvo uchitengesa pasi pemazita akasiyana munzvimbo dzakasiyana (TP501UB muEurope, Q553UB kuUS), asi zvingave zvakakodzera kuchera imwe, sezvo $ 999 ichakutsvakira iyo Core i7 Skylake processor, Nvidia 940M mifananidzo yakatsaurirwa, 12 GB ye RAM uye FHD IPS 15.6-inch inoshandurwa inoratidzira. IVivobook Flip inowanikwawo isina mifananidzo yakatsaurirwa, uye mune mashoma akasiyana marongero eruvara.
Iwe unobaira pakubata (inorema 5.1 lbs), pahupenyu hwebhatiri uye kutaridzika kana kuvaka mhando, izvo zvakanaka, asi kwete zvinoenderana nesarudzo dzekutanga dzataurwa pamusoro. Zvakadaro, iyi Vivobook imakomputa yakagadzirwa zvakanaka ine yakajeka specs, saka ini ndinotarisira kuti vazhinji venyu vachatarisa kupfuura izvi zvipingaidzo muchiziva zvamuri kuwana mukati mekesi. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye yakagadziridzwa mitengo uye kumisikidzwa.
azvino madhiri paAsus Vivobook Flips
Iyo Asus Vivobook Flip inopa 15-inch skrini uye yakanakisa Hardware specs yemari shoma
Verenga pamusoro kuti uwane dzimwe sarudzo. Isu tichavhara zvakadzama iyo yekutanga 2-in-1 inoshandurwa kutanga, uye tobva tazotarisa pane mamwe anodhura mahybridi muchikamu chechipiri chechinyorwa chino, kusanganisira izvo zvambotaurwa pamusoro.
Premium 2-in-1 ultrabooks uye zvinoshandurwa
Ichi chikamu chinounganidza akanakisa emahara malaptops anowanikwa muzvitoro izvozvi. Beefy specs, akaisvonaka masikirini, mabhatiri makuru, zvigadzirwa zveprimiyamu uye hunyanzvi hwekugadzira ndeimwe yekutengesa mapoinzi, usango tarisira kuti dziuye dzakachipa.
HP Specter x360 13 uye 15
Kana iwe uchida kushandisa kanenge $ 1000 ye2-in-1 laptop, iyo HP Specter x360s, iyo inowanikwa ne13 kana 15.6-inch kuratidza, inofanirwa kuve iri pamusoro peyako runyorwa.
Matare anoshandiswa kune ese kesi yeiyo 13-inch modhi, mune yekupedzisa sirivheri, saka chishandiso chiri chakanaka uye chakanyatsovakwa. Yakanakisa backlit keyboard uye yakafara trackpad chikamu chemusanganiswa, pamwe nechakanaka skrini, asi isina digitizer uye Active Pen rutsigiro. Mukati mefuremu mune Kaby Lake U Hardware, inosvika 16 GB ye RAM uye M.2 PCIe SSD yekuchengetedza, saka iyo laptop inobhururuka mukushandisa kwemazuva ese, nepo 58 Wh bhatiri inovimbisa 6-10 maawa ehupenyu hwebhatiri pane imwechete kubhadharisa.
Iyo yazvino Specter x360 13 zvakare yakaonda, compact uye yakajeka yekirasi yayo. Iyo inorema chete 2.85 lbs uye inoyera 0.55 ″ mune yayo gobvu nzvimbo.
HP inopawo iyo yapfuura vhezheni yeSpecter x360 13, imwe huru laptop yayo. Iyi yakati kurei uye inorema (3.3 lbs), asi inorongedza yakazara-saizi madoko (pasina Thunderbolt 3 hazvo, nepo modhi nyowani iine maviri eaya), skrini ine digitizer uye peni rutsigiro, uye yakati kurei 60 Wh bhatiri. Iwe zvakare uchaiwana yakadzikiswa muzvitoro zvakawanda, nekudaro kunze kwekunge iwe uchida iyo Kaby Lake Hardware kana mutete-uye-wakareruka muviri, izvi zvinogona kupa zvirinani kukosha kune yako buck.
Zvese mune zvese, isu tiri vateveri vakuru veSpecter x360s, sezvaunogona kunyatso kuudza kubva kwedu kudzika-kwakadzama kweiyo yapfuura 13-inch modhi, naizvozvowo kuongorora kwedu kwekusiyana kwezvazvino. Iyo yepasi modhi yemanheru-2016 vhezheni inotanga pamadhora 1050 ekugadzirisa kwakanaka neCore i5 processor, 8 GB ye RAM uye 256 GB yekuchengetera, nepo vekare Skylake mamodheru aripo emadhora 800 zvichikwira.
Tevedza zvinongedzo pazasi kuti tiongorore zvizere zveSpecter x360 uye nezvazvino zvibvumirano pane ese mavhezheni eichi chinoshandurwa.
Iyo HP Specter x360 13 inopa zvese kutaridzika uye maficha, ezve pasi pe $ 1000
Iyo Specter X360 inowanikwawo mune yakakura musiyano, iine 15.6-inch kuratidza. Iyi vhezheni inotengeswa seSpecter x360 15t uye inogovera hunhu hwakawanda neiyo 13-inch modhi, senge iyo keyboard, yesimbi kesi uye kuvaka kwakasimba. Iyo zvakare inowana iyo 360-madhivhiri anotendeuka echiratidziro, inowanikwa pamwe ingave FHD kana UHD IPS mapaneru.
Nekudaro, iyo 15-inch modhi inorongedza yakakura 64.5 Wh bhatiri, seti yematauri mana akatenderedza keyboard uye achisundidzira kurira kumusoro, inorema (4.1 lbs) uye inodhura, ine base base vhezheni inotangira pa $ 1149.
Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye zvingangoita zvidzikiso.
Samsung ATIV Bhuku 9 Spin
Samsung inogadzira malaptop makuru, zvakashata ivo vanozvitengesa chete pamisika inosarudzwa. Kune avo venyu vari muUS kunyangwe, iyo ATIV Bhuku 9 Spin isarudzo iwe yaunofanirwa kuve nayo pane yako ipfupi sarudzo kana iwe uri mushure meiyo 13-inch inoshandurwa.
Iyi inouya ne360-degree foldable kuratidza, uye yakavakwa kwazvo, nekuda kweayo aluminium kesi uye chassis, asi yakareruka kupfuura iyo Specter (inorema ingori kunyara kwe2.9 lbs), slimmer (0.59 ″) uye ine tsoka diki, sezvaunogona kutaura kubva padiki bezel yakatenderedza skrini. Kutaura nezve izvo, Samsung yakaenda neakanaka IPS pani ine QHD + resolution, iyo zvisinei isina digitizer uye peni rutsigiro.
Nhoroondo, zvese zvakapfuura zveSamsung ultraportables zvakakwira zvakanyanya kana zvasvika pakutarisa nekuvaka mhando, asi zvakati zvakabaira iyo keyboard chiitiko uye iyo IO. Izvo hazvisi izvo chaizvo zviri pano. Iwo maSpin mhando zvakanaka, kunyangwe makiyi ekufamba ari mapfupi, uye chinhu chega chaucharasikirwa pamativi chinongedzo cheThunderbolt 3. Rimwe divi-mhedzisiro yedhijitari dhizaini kunyangwe iri bhatiri diki rakasvinwa mukati memuchina uyu, iine huwandu hwe39 Wh, inongokwana maawa mashanu kusvika mashanu ekushandisa zuva nezuva pane chaji. Izvo hazvina kushata, asi mazhinji mamwe Skylake anotendeuka anozoabuditsa kunze.
Kana zviri zvemukati mukati, iyo ATIV Book 9 Spin yakavakirwa pane Intel Skylake U chikuva, asi inongotsigira chete M.2 SATA kuchengetedza uye inosvika ku8 GB ye RAM, nepo ivo vakwikwidzi vanogona kutora kusvika ku16 GB ye RAM uye PCIe SSDs .
Saka mumashoko mashoma, iyo Samsung ATIV Bhuku 9 Spin haisi yepamusoro yepamberi 2-in-1 kunze uko, inokurumidza kana yakarebesa kugara. Iyo zvakare yakakosha kupfuura iyo HP Specter x360 kana iyo Lenovo Yoga 900, semhando yakachipa kwazvo inotengesa kwakatenderedza $ 1300, asi inouya neCore i7 processor, 8 GB ye RAM uye 256 GB SSD, nepo vamwe vagadziri vachisundira ezasi-kumagumo specs pamagadziriro avo epasi, nekudaro iwo anodhura. Asi kana iwe uri mushure memuchina unotakurika uye wakavakwa mushe wekushandisa zuva nezuva, mikana iwe unozodanana neiyi. Takaita, sezvo iwe uchigona kuverenga kubva kune edu ongororo, uye isu hatisi toga, tichitonga nemhinduro yakanaka kwazvo yeiyi laptop zvibodzwa nevatengi paAmazon, Best Buy kana maforamu.
azvino madhiri pane Samsung ATIV Bhuku 9 Spin
Lenovo Yoga 900 uye 900S
Iyo Yoga 900 ndeyeLenovo yepamusoro-tier mutengi 2-in-1 panguva yeichi posvo uye imwe yeakanakisa 13-inch mahybridi, padyo neiyo HP uye Samsung mayuniti akambotaurwa.
Kungofanana neavo vaviri, iyo Yoga 900 inowana 360-degree inoshanduka skrini uye yakavakirwa pane Intel Skylake Hardware. Asi pane zvishoma zvidiki zvidiki zvinozvipatsanura, iine nzvimbo yayo hombe yekutengesa uri iwo mutengo unodhura. Iyo Core i7 kumisikidzwa ine 8 GB ye RAM uye 256 GB yekuchengetera semuenzaniso inotengesa $ 100 kusvika $ 200 isingasviki pane yakafanana yakagadzirirwa ATIV Spin 9 Spin kana Specter x360.
Asi pane kubata here? Zvakanaka, hausi kuzoona chero kubva kuma specs kana kumifananidzo, sezvo iyo Yoga 900 inotaridzika chaizvo, kunyanya pakupedzisa orenji, yakatetepa uye yakareruka (2.9 lbs), inorongedza solid solid ine rutsigiro rwePCIe yekuchengetedza uye 16 GB ye RAM, inowana 66 Wh bhatiri uye QHD + kuratidza, ine ikozvino tsigiro yeAnoshanda Pens.
Mukushandisa kwemazuva ese hazvo, iyo Yoga 900 inonzwa senge yakachipa uye isina kunyatso kuvakwa semamwe maviri, uye nenyaya yekuti nyaya yayo nemuviri zvakagadzirwa nepurasitiki, kwete simbi, ndiyo inowana mhosva yacho. Ikozve kune iyo typing chiitiko, icho chiri kushomeka nekuda kwekhibhodi iri mushy. Uye pamusoro peizvi, vashandisi pamaforamu uye ongororo paAmazon, Best Buy kana Chitoro cheMicrosoft vanogunun'una nezve mamwe mamiriro ekudzora mhando, kubva pakunonoka kuita kunze kwebhokisi uye dzimwe nguva inotonhora / kuratidza kupaza mutyairi, kune glitchy Wi-Fi uye yakaremara trackpad.
Ramba uchifunga kuti zhinji dzenyaya idzi dzakagadziriswa nesoftware inogadziridza, ndosaka iyi laptop iripo pano. Ingo ita shuwa kuti iwe unotenga kubva kune akavimbika mutengesi uyo anozogamuchira kudzoka uye kutsiva, kungoitira kuti iwe ungazopedzisira wave kutora pfupi pfupi tsvimbo.
azvino madhiri paLenovo Yoga 900
Buda kuongorora kwedu iyo Yoga 900 nhevedzano uye kuenzanisa neiyo Yoga 3 Pro, kana tsvaga kuti zvinofamba sei zvinopesana neiyo HP Specter x360 kubva pane ino positi.
Iyo Lenovo Yoga 900 yakatetepa, inokurumidza uye iri nani mutengo kupfuura ayo anokwikwidza, asi pane kubata
The Lenovo Yoga 900S iri yakatetepa, yakareruka uye isina faniro yeiyo Yoga 900, yakavakirwa pane Intel Core M Hardware. Inorema chete 2.2 lbs (1 kilo) uye iri 0.5 yeinchi gobvu, uye nepo ichitaridzika sekutenga kukuru, pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kuziva usati wawana imwe.
Iyo Hardware specs yakasimba, ine inosvika ku8 GB ye RAM uye NVMe SSD yekuchengetedza, inowana 12.5-inch yakakwira-resolution touchscreen uye 53 Wh bhatiri, inokwana kuchengetedza izvi zvichimhanya kwema7-8 maawa ekushandisa kwemazuva ese. Nekudaro, iyo keyboard haina kudzika, iine mashoma kiyi sitiroko, iyo skrini haina digitizer uye peni rutsigiro, uye iyo hardware inopwanya kunyangwe nekushandisa kwemazuva ese, saka iko kuita kuri kushomeka.
Pamusoro peizvi, iyo Yoga 900S inotanga pamadhora 1099 yekumisikidza yakakosha ne4 GB ye RAM uye 128 GB SSD, saka unenge uchibhadharira aesthetics pano, asi unenge uchishaikwa mukushanda. Ndicho chikonzero zano rangu nderekuti ugare kure.
Iyo Yoga 900s ndiyo humbowo hwekuti rakatetepa Laptop hachisi chaicho smart kutenga
Microsoft Surface Pro 4 uye Surface Book
Iyo Microsoft Surface Pro 4 inonyanya kuita Windows piritsi, iine fomu yechipiri laptop, kusiyana nemamwe akawanda anotendeuka kunze uko.
Maitiro aya anoita kuti Surface Pro iwedzere kujeka uye yakareruka kupfuura mamwe akawanda ma2-in-1s (1.76 lbs yeslate chete), uye semhedzisiro piritsi rakakwirira. Sekombuta, inogona kuita zvakanaka pakapfava pabhokisi nekhibhodi yakanamatira, asi haina kugadzikana kushandisa pamakumbo ako.
Iyo Surface Pro ine akati wandei akasarudzika, senge iyo 3: 2 yakakwira-resolution skrini ine yakamanikana bezels uye digitizer (peni inosanganisirwa), iyo yakawanda-angle inogadziridzwa kickstand kumashure, iyo yakasimba magnesium muviri, yakanyarara kutonhora sisitimu uye iyo iri shoma IO. Pamusoro peizvozvo, iyo Surface Pro 4 inofambiswa neIntel Skylake U Hardware, saka mashandiro ehungwaru ari par pamwe nemamwe eprimiyamu zvigadzirwa zvinowanika mazuva ano, uye zvinogona kutosvina kusvika kumaawa masere ehupenyu hwebhatiri pane chaji, kunyangwe kurongedza bhatiri diki.
Pakazara, iyo Surface Pro 4 chishandiso chakanakisa, asi zviri kwauri kuti usarudze kana chiri icho chaicho kwauri kana kwete. Mutengo waro wepamusoro unogona kunge uri chinhu chakakosha zvakare, sezvo hwaro vhezheni inotangira pa $ 899 yeCore m3 yekumisikidza, nepo maCore i5 modhi anotanga pa $ 999 uye anogona kudhura zvakanyanya kana iwe ukawedzera imwe RAM uye ingangoita 256 GB yekuchengetedza . Ah, uye uchafanirwa kubhadhara madhora zana nemakumi matatu ezvakawanda zvebhokisi rebhodi, iro risina kuiswa nekutadza.
Zvakadaro, kumwe kwekugadziriswa kuripo kwakadzikiswa pamhepo, tarisa iyi link kune rumwe ruzivo uye zvinogona kuita madhiri.
Iyo Microsoft Surface Book yakasarudzika 2-in-1. Pamidzi yayo ichiri piritsi rine dhoko, asi kusiyana neSurface Pro 4, iri kunyanya laptop.
Mune mashoma mazwi, iyo Surface Book rinotaridzika uye rinonzwa kunge laptop. Inowana 13.5-inch 3: 2 touchscreen ine peni rutsigiro, uye yakanaka keyboard uye trackpad, pamwe neakawanda madoko mashoma pamativi. Iyo zvakare inowana Skylake Hardware, inosvika 16 GB ye RAM, inokurumidza kuchengetedza uye ine simba mifananidzo.
Asi pane kubata: iyo skrini inosvikika uye inoshanda seyakamira-yega piritsi. Iyo processor, ndangariro, kuchengetedza uye bhatiri diki rakanamirwa kuseri kwechiratidziro ichi, uye slate iri rakareruka, rakatetepa uye riri nyore kubata muruoko. Iyo haina kickstand zvakadaro, haina zviteshi uye inogona kungoenda kweanenge maawa maviri kana maviri uchibhadhariswa, saka kubatsira kana kwakadzvanywa kuri padiki pane. Yakasungirirwa padoko, iyo ensemble inowana iyo keyboard, iyo IO, imwe bhatiri uye yakasarudzika discrete Nvidia GPU, saka zvakazara iro Surface Book iri kumanikidza chaizvo sebhuku rekunyorera. Chekungonyunyuta chete chingangove huremu hwekutenderera 2 lbs, asi ndicho chinhu chandingagare nacho.
Nekudaro, chii chiri kuenda kutungamira akawanda kubva kuSurface Book ndiwo mutengo. Iyo yakachipa kwazvo vhezheni inoenda $ 1499, uye izvo zvinongova zveCore i5 processor ine 8 GB ye RAM uye 128 GB yekuchengetedza. Kana iwe uchida zvimwe kuchengetedza kana iyo discrete GPU, iwe uchafanirwa kubhadhara kutenderedza $ 2000, uye iyo mitengo inokwira kusvika ku $ 3000 yemhando yepamusoro-yedanho.
Zvakadaro, ndakaona kuti mazhinji mamodheru anotengesa mashoma online. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye zvakabuditswa.
azvino madhiri paSurface Book
Bhuku reSurface rakanakisa sepombi uye rakanakisa sehwendefa futi, asi mutengo waro wepamusoro unoita kuti ive yakaoma kutenga kune vazhinji
Asus Shanduko 3 akateedzana
Iyi ndiyo imwe nzira kune Microsoft Surface Pro 4, iyo yainogovana navo zvakanyanya hunhu uye kunyangwe dhizaini dhizaini.
Iyo Transformer 3 Pro zvakare iri piritsi rine keyboard folio, yakavakirwa pa Skylake U Hardware uye ine 3: 2 yekubata skrini ine peni rutsigiro. Nekudaro, skrini yayo yakati kurei uye inowana yakafara-gamut pani, uye pakati pezvinhu zvinosanganiswa nemuchina uyu uye iyo Surface Pro 4 haisi yeThunderbolt 3 chiteshi uye rutsigiro rwekukurumidza NVMe kuchengetedza, iyo yese inosanganiswa ichaigadzira. kunyanya inonakidza kune nyanzvi dzekugadzira.
Iyo Transformer 3 Pro yakarongedzerwa kutengesa ne $ 999 gare gare gore rino, uye iro pabhodhi rekhibhodi rinogona kuverengerwa. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezvazvo mune ino posvo yakatsaurirwa, kwaunowanawo ruzivo pane inotakurika uye isingadhuri Transformer 3 T305CA, isina fanika raiti rakavakirwa paKabylake Hardware. Kana iwe unogona kutarisa kwedu kwazvino ongororo yeT305UA, uye chinyorwa chedu pane fanless T305CA.
Iyo Asus transformer 3 Pro T303UA (kuruboshwe) uye Shanduko 3 T305FA (kurudyi) sarudzo dzekutsvaga muhafu yepiri ya2016.
Iyo Lenovo ThinkPad Yoga bhizinesi 2-in-1s
Lenovo akasanganisa iyo 2-in-1 fomu chinhu nematanho epamusoro emitsara yavo yebhizinesi, uye michero yekubatanidzwa uku ndeye ThinkPad Yogas, iyo X1 Yoga uye iyo P40 Yoga panguva yechinyorwa ichi.
The Lenovo ThinkPad X1 Yoga ndeyekumusoro-kumagumo ultraportable yakatorwa kubva kune iyo ThinkPad X1 Carbon dzakateedzana. Inowana inoyevedza aesthetics, kabhoni fiber uye magnesium kesi iyo inorema chete 3 lbs, 14-inch yakakwira-resolution touchscreen ine isina-kupenya kupedzisa uye Wacom AES digitizer, Skylake Core U Hardware uye 52 Wh bhatiri. Iyo zvakare inowana Lenovo's iconic AccuType keyboard, hombe trackpad ine Clickpoint uye yakatsaurwa bhatani bhatani, uye yakasimba seti yemachiteshi pamativi.
Ongororo dzinotaura zvakanaka nezve iyi laptop, asi iwe unofanirwa kuziva kuti inotonhora zvakanyanya pasi pemutoro uye haizogara kwenguva refu kupfuura maawa 5-6 ekushandisa zuva nezuva.
Pakazara, iyo Lenovo X1 Yoga ibhizimusi rine hunyanzvi rinoshandurwa, asi uchafanirwa kubhadhara peneni yakanaka kuti uwane. Kugadziriswa kweCore i5 ine 8 GB ye RAM uye 256 GB yekuchengetera inotengesa kwakatenderedza $ 1400, nepo processor yeCore i7 uye 512 GB SSD inodhura madhora mazana matatu.
azvino madhiri paLenovo X1 Yoga
Iyo Yoga X1 ndeyekumusoro-soro kweLenovo isingachinjiki panguva ino yekuvandudza
Kana iwe usiri kuda iyo yakapusa isingachinjike kunze uko uye ungatoda kubhadhara zvishoma kune chako kifaa, asi uchiri kuwana kuvaka kwakasimba, iyo Lenovo keyboard uye skrini ine peni rutsigiro, pane iyo ThinkPad Yogas inogona kunge iri yako.
Kune 14-inch modhi inowanikwa, iyo ThinkPad Yoga 460, iyo inorema 3.9 lbs uye inowana 14-inch FHD touchscreen, Skylake U mapurosesa uye sarudzo Nvidia 940M mifananidzo, pamwe ne53 Wh bhatiri. Aya mafekitori anoigadzira yakasimba-inotenderera iyo inogona kusangana nemabasa ezuva nezuva, zvemultimedia zvemukati uye mimwe mitambo. Haigone kutakurika, asi inoshandurwa ine hombe skrini uye ine mutengo wakaringana, sezvo iwo mavhezheni evhezheni anotanga pamadhora mazana mapfumbamwe nemazana mashanu emamiriyoni uye unofanira kuawana achitodhura online.
azvino madhiri paLenovo ThinkPad Yoga 460
Iyo ThinkPad Yoga 260 ndiyo diki vhezheni, iine 12.5-inch FHD kuratidza. Iyo yazvino Yoga 260 inorema 2.9 lbs, inowana yakajairwa keyboard, trackpad uye trackpoint, inowana Skylake U Hardware uye 44 Wh bhatiri, inokwana kutenderedza 5-6 maawa ekushandisa zuva nezuva. Iyo CPU inokombamira kukwikwidza pamitoro yakakwira kunyangwe uye fan iri ine ruzha, zvinoenderana nemawongororo aripo, asi izvo parutivi, inyatsoita compact inoshandurwa.
Iwo mavhesi epasi neIntel Core i5 processor, 4 GB ye RAM uye SSD yekuchengetedza inotengeswa pamadhora mazana mapfumbamwe, uye pane mukana wakanaka wekuti iwe uwane iwo akaderedzwa zvishoma online, nepo apfuura gen mamodheru ane Broadwell Hardware inofanirwa kunge iri isingadhuri, kana uchikwanisa uchiriwana dziripo.
azvino madhiri paLenovo ThinkPad Yoga 260
Iyo ThinkPad Yogas inopa yakanakisa yekuvaka mhando, yakanaka keyboard uye yakanaka skrini ine peni rutsigiro rwepasi pe $ 1000
Tiri kutaurawo nezve Lenovo ThinkPad P40 Yoga, chiteshi chebasa chine chinyorwa chinoshandurwa. Lenovo anozvishambadza sekombuta inoreva mainjiniya, vanodzikira uye graphic maartist, nekuda kwesimba rine simba mukati ma Skylake Core U mapurosesa uye Nvidia Quadro M500M mifananidzo, uye kune 14-inch touchscreen ine yakasanganiswa Wacom AES digitizer. Ongororo dzakashata chaizvo pachigadzirwa ichi hazvo.
Zvine mutengo zvisingabhadharwe uye zvinoshandurwa
Ichi chikamu chakachengeterwa mamwe madhijitari-anoshamwaridzika madhizaina, ayo anotengesa zvakaderera pasi pe $ 1000. Tichatanga nemazwi mashoma pane izvo chaizvo zvinodhura sarudzo (nemaMSRPs ari pasi pe $ 500) uye isu tichaenderera mberi ne13 uye 15-inch malaptop ezuva nezuva zvichidzika pasi.
Iwo madiki $ 500 2-in-1 mini-malaptop
Kana uchingova ne $ 500 kana shoma yekushandisa inotakurika 2-in-1, unofanirwa kufungisisa zvishandiso muchikamu chino. Kune rimwe divi, kana bhajeti yako ichikubvumidza iwe kuti uwane chimwe chinhu chiri nani, inosvetukira pasi kuchitsauko chinotevera.
Izvi zvinonyanya kuvakwa paIntel yakadzika-simba Hardware mapuratifomu (Atom, Pentium kana Celeron), saka havangakunde maererano nemashandiro kana kugona kwakawanda, asi vachiri kurongedza firepower yakakwana kubata zvakanaka zvinoitwa zvezuva nezuva zviitiko, sekubhurawuza, kugadzirisa zvinyorwa, kutarisa maemail, kuteerera mimhanzi, kuona mafirimu uye zvichingodaro, chero bedzi usingaedze kuita izvi zvese zvinhu panguva imwe chete. Kune rimwe divi, izvo zvavanorasikirwa mukuita kwavanowana muhupenyu hwebhatiri, sezvo mazhinji emidziyo aya anogona nyore kuenda kwemaawa 6+ ekushandisa pakubhadharisa.
Iyo Dell Inspiron 11 3000 iri 11.6-inch ultraportable ine 360-degree foldable kuratidza uye yakanaka kesi inowanikwa mune mashoma akasiyana mavara. Iko kune zvakare mashoma masarudzo esoftware aunosarudza kubva, pamwe neCeleron, Pentium kana Core m3 Skylake CPUs, uye iyo inopa iyo yakaenzana huwandu hwechirango kana uchibata nemaapplication akawanda panguva imwe chete.
Pamusoro peizvi, Inspiron 11 inopa yakazara-saizi uye yakagadzikana khibhodi, yakasimba seti yemachiteshi uye 32 Wh bhatiri iyo inogona kuisundira kwemaawa angangoita matanhatu pakubhadharisa, ese akaiswa mukati me6 inch gobvu, 0.8 mapaundi muviri. Zvakanyanya kushata iyo skrini inongowana chete TN pani kunyangwe, ndingadai ndakatarisira kukwidziridzwa kweIPS panguva ino.
Iyo Inspiron 11 3000 nhepfenyuro inodhura hazvo, nemitengo inotangira panosvika madhora mazana maviri nemakumi mashanu emaCeleron vhezheni uye kuenda kutenderedza mazana mana emadhora mazana mana ekugadziriswa kweCore m250 Tevera iyi link yemitengo yepamusoro-uye-nguva uye ongororo yemushandisi.
Dzazvino madhiri pane iyo Dell Inspiron 11 3000
Iyo Inspiron 11 3000 iri compact, yakagadzirwa zvakanaka uye inodhura
HP ine mudziyo wakafanana muzvitoro, iyo Pavilion x360 11, imwe inoshandurwa 11-incher inowanikwa mune akawanda marangi zvirongwa.
Iyo Pavilion inowana maviri makuru ekutengesa mapoinzi pamusoro peInspiron: IPS kuratidza uye bhatiri hombe (35 kana 43 Wh sarudzo). Kune rimwe divi, iwe unogona chete kumisikidza naCeleron nePentium processor, saka hapana sarudzo yeanokurumidza Hardware, uyezve uchafanirwa kubhadhara imwe shoma pane yaungabhadharira iyo yakafanana yakagadzirirwa Inspiron, asi izvo zvakajairwa kufunga nezve mabhenefiti. . Iyo Pavilion x360 11 inoshandurwa inotengesa pakati pe $ 280 ne $ 380, uye iwe ungangoiona iri isingadhuri online. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko.
Dzimwe sarudzo mune imwechete 11-inch chikamu ndidzo Lenovo Flex 3 11 (iine 30Wh bhatiri, TN inoratidzira uye Celeron kumisikidza inotengesa madhora mazana matatu nemakumi matatu emadhora) uye iyo Acer Aspire R11, izvo zvatinoongorora pano pane saiti nguva yadarika. Iyi inotanga pa $ 249 yekugadziriswa kweCeleron uye inowana hombe 50 Wh bhatiri, asi vangangove vatengi vachatofanira kugamuchira yayo TN kuratidza uye yayo inorema 3.5 lbs muviri.
Dzazvino madhiri pane Aspire Chromebook R11
Iyo Aspire R11 yakachipa uye inorongedza bhatiri hombe, asi vanogona kutenga vachatofanira kutambira iro rinorema kesi uye TN kuratidza
Rondedzero yakadzama yecompact inoshandurwa inowanikwa mune ino posvo yakatsaurirwa, kusanganisira zvidiki zvidiki zvine 10-inch skrini senge Asus Shanduko Pad kana iyo Acer Aspire Chinja akateedzana. Iwe unogona zvakare kutarisa anowanikwa maChannelbook, senge Acer Chromebook R11 kana iyo Asus Chromebook Flip, zvataurwa munyaya ino.
Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, kana iwe uchida bhuku rinodhura rine rakakura skrini, ini ndingapa zano rekutarisa iyo Toshiba Satellite Fusion L55W, iyo inopa yakazara-saizi keyboard pamwe neNumPad, Core i3 kana i5 processor, 45 Wh bhatiri uye 15.6-inch TN HD yekubata. Seye 15-inch notibhuku, hazvishamise kuti iyi unit inorema kutenderedza 5 lbs uye yayo TN skrini haina kunaka nemanyorero ezuva ranhasi, asi zvakazara iyo Satelitte Fusion inokosheswa uye inodhura, ine Core i3 kumisikidza kuenda pasi pe $ 500.
azvino madhiri paToshiba Satellite Fusion L55W
Iyo Toshiba Satellite Fusion L55W inopa zvakaomarara Hardware uye 15.6-inch inoshandurwa inoratidzirwa pasi pe $ 500
Mazuva ese anodhura 2-in-1s
Muchikamu chino iwe unowana gumi neshanu kusvika gumi neshanu-inch inoshandurwa inotengesa pakati pe $ 13 kusvika $ 15 uye inguva yeichi chiitiko.
Asus Zenbook Flip UX360CA uye UX360UA
Zvichienzaniswa nezvimwe zvakawanda zvepakati-renji zvinoshandurwa, iyo Zenbook Flips zvinyowani zvitsva dhizaini, ndosaka vachinzwa uye vachitaridzika zvinoshamisa mukuenzanisa. Simbi inoshandiswa kwakawanda yemiviri yavo, hinji idiki, asi yakasimba uye yakatsetseka, uye huremu hwakachengetwa pasi, kunyangwe hazvo iwo marongedzo ane simba Hardware uye makuru mabhatiri.
Zenbook Flip inowanikwa mumhando mbiri: iyo UX360CA haina fan, yakavakirwa paIntel Core m Hardware, nepo UX360UA ichimhanyisa Intel Core i processors uye nekudaro inowana fan. Pane mimwe misiyano mishoma pakati pezviviri, asi maitiro mazhinji uye mitsara yekugadzira yakafanana.
Zvakadaro, pakati pekusiyana, iyo Zenbook UX360UA inowana backlit keyboard, nepo UX360CA isingaiti. Iyo zvakare inowana izere-izere saizi HDMI chiteshi, yekuzadza grill kuruboshwe-kuruboshwe uye dhizaini yakati siyanei yemuzasi muviri nemahinji, pamwe hombe 57 Wh bhatiri kana ichienzaniswa neiyo 54 Wh bhatiri pane isina fan fan.
Iwe uchawana zvimwe nezve iyo UX360UA kubva kuongororo yedu yakazara, uye kuongorora kwedu kweiyo fanless UX360CA modhi inowanikwa pamusoro apa.
Kufananidzwa kunosanganisira sarudzo dzechiratidziro, iine FHD kana QHD + IPS mapaneru, marongero ebhodhi, matrackpads uye maspika akaiswa padumbu, kumberi.
Zenbook Flip UX360CA inowanikwa muzvitoro panguva ino yekuvandudza, nemitengo inotangira pa $ 699 yekugadziriswa neCore m3 processor, 8 GB ye RAM uye 256 GB yeSDD yekuchengetedza.
Iyo Zenbook Flip UX360UA yakarongerwa kuburitswa mukutanga kweKudonha 2016, uye ini ndaizotarisira kumisikidzwa kweCore i5 kutengesa kwakatenderedza $ 900- $ 1000. Ini ndichagadzirisa chikamu ichi kana taziva zvakawanda.
Ipo iyo Zenbook Flip UX360CA (kuruboshwe) uye UX360UA (kurudyi) inogona kuoneka yakafanana nekutarisa kwekutanga, pane chaipo huwandu hwakaringana hwemisiyano pakati pavo
Dell Inspiron 7000 uye 5000 2-in-1 akateedzana
Iyo Inspiron 13 7000 ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa 13-inch 2-in-1s kunze uko, uye yanga iri kutenderera mune imwe fomu kana imwe kwemakore mashoma ikozvino, iine zvishoma zvigadziriswazve uye shanduko munzira.
Iyo inopa 13.3-inch IPS FHD inoshanduka inobata skrini, yakanaka backlit keyboard, yakawanda emachiteshi uye yakasimba sturved kesi, ine sirivheri yesimbi yekupedzisa. Dell anoshongedza iyo yazvino modhi ne Skylake U mapurosesa, anosvika ku8 GB ye RAM uye akasiyana marudzi ekuchengetedza. Kune chete 42 Wh bhatiri mukati kunyange, nepo akawanda madhizaini anopa yakakura, uye semhedzisiro iyo Inspiron 13 7000 inodonha maererano nehupenyu hwebhatiri.
Zvakadaro, muchina uyu sarudzo yakasimba yemari. Iwo hwaro mamodheru anotanga kutenderedza madhora mazana matanhatu ane mazana mashanu emadhora eCore i650 processor ine 5 GB ye RAM uye 8 GB yeSDD yekuchengetedza uye magadzirirwo mazhinji aripo anoderedzwa online.
Dzazvino zvidzoreso pane iyo Dell Inspiron 13 7000
Iyo Inspiron 13 7000 yakavakwa zvakanaka uye inorongedza akakodzera maspeceti emutengo wakanaka, asi bhatiri rayo diki rinogona kuve rekubata-kutyora vamwe
Dell zvakare inopa 15 uye 17-inch shanduro dzeInspiron 7000. Iyo yekutanga ingori yakanyanya kuwanda yeiyo 13-incher, iine yakafanana Hardware, bhatiri saizi uye keyboard, asi 15.6-inch inoshandurwa inoratidzira uye nehuremu hwese hwekutenderera 4.9 lbs. Iyo inototengesa nemutengo mumwe chete, pamwe neshanduro dzepasi dzinotangira pamadhora mazana matanhatu nemakumi mashanu. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko.
Iyo 17-inch modhi inochengeta yakafanana dhizaini dhizaini, asi haingowana chete 17.3-inch inoratidzira, asiwo yakasarudzika keyboard ine chikamu cheNumPad, maviri RAM slots, nzvimbo ye 2.5-inch yekuchengetera drive padhuze neM .2 inosanganisirwa pamhando diki, pamwe ne56 Wh bhatiri. Iyo Inspiron 17 7000 inotanga pa $ 899 yeCore i5 kumisikidza ine HDD yekuchengetedza, uye iri chaizvo chimwe chevashoma vashoma vanoshandurwa vane 17-inch kuratidza inowanikwa kunze uko. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko.
Iyo Inspiron 17 7000 ndeimwe yeayo mashoma mashoma-17-inch inoshanduka kunze uko uye wotanga kutenderedza madhora mazana mapfumbamwe
Dell anopawo 13 uye 15-inch vhezheni yeInspiron 5000 2-in-1s, ine bulkier epurasitiki makesi, ezasi magumo specs, isina backlit keyboard uye nemitengo inodhura. Muchokwadi, kunze kweInspiron 13 5000 yakafanana chaizvo nechizvarwa chekare Inspiron 13 7347 yatakatarisa nguva yadarika, saka iyo Inspiron 5000s ndeyekutevera-kwevakuru Dell anotendeuka, nepo kumucheto kwakakwirira Inspiron 7000s akagamuchira kugadziriswazve uye zvishoma Hardware kugadzirisa.
Iwe unogona kuwana zvimwe nezve iyo Inspiron 5000 inoshanduka nekutevera izvi zvinongedzo: iyo 13-inch modhi uye yakakura 15-inch musiyano, inova yakaremerwa vhezheni yeyuniti diki ine hunhu hwakafanana uye ma specs, senge pane yepamusoro renji.
Iyo 13 uye 15-inch Inspiron 5000 inofanira kunge iri pane yako runyorwa kana iwe uchida yakasimba laptop ine yakadzikama specs uye uye iwe uchingova nebhajeti shoma
Lenovo Yoga 710 akateedzana
Iyo Yoga 710 yakateedzera inosanganisira 11, 13 uye 15-inch modhi mazuva ano.
The Yoga 710 11 inotakurika zvakanyanya, inorema chete 2.35 lbs, uye yakavakirwa pane isina fanika Intel Core M chikuva, ine inosvika ku8 GB ye RAM uye inosvika ku256 GB yeSSD yekuchengetedza. Iyo zvakare inowana 40 Wh bhatiri, yakajeka IPD FHD yekubata skrini, yakanaka yakanaka keyboard isina kuvhenekesa uye ine yakanaka trackpad. Kune rimwe divi, inowanzo kumhanyisa kupisa uye iyo IO inogumira, iine imwechete USB 3.0 slot padivi uye micr-HDMI yevhidhiyo kuburitsa.
Iyo Yoga 710 11 inotanga pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu ekugadziriswa neCore m550 processor, 3 GB ye RAM uye 4 GB yekuchengetedza. Dzimwe sarudzo dzinodhura dzakavakirwa paPentium processor dzinowanikwa, uye unogona zvakare kutarisa iko kwazvino kumisikidzwa uye kumusoro-kune-zuva mitengo kuburikidza neiyi link.
Iyo Yoga 710 11 yakajeka, compact, fanless uye inokurumidza. Iwe uchafanirwa kugadzira nekuda pasina backlit keyboard asi
The Yoga 710 14 ndiro simba-bhiza mune akateedzana, mukwikwidzi wevose gumi nematanhatu-inch inoshandurwa inotaurwa muchikamu chino, asi ine chihombe chakakura che13-inch yekubata. Ichiri chiumbane, chakareruka (14 lbs) uye yakatetepa (3.4 ″), uye yakavakwa zvakanaka, kunyangwe hazvo imwe yenyaya yacho inogadzirwa nepurasitiki. Iyo Hardware inosanganisira Skylake Core U mapurosesa, iyo Nvidia GT 0.7MX gadziriso mhinduro, SSD chengetedzo, 940 Wh bhatiri uye IPS pani, uye iyo keyboard iri backlit.
Iyo Nvidia chip ndiyo inoisa izvi kunze kwevazhinji vanokwikwidza, senzira yeavo vanonakidza mune mimwe mitambo yekutamba. Iyo Core i5 kumisikidzwa ne8 GB ye RAM, 256 GB SSD uye iyo Nvidia mifananidzo inotanga pamadhora mazana masere, unova mutengo wakanakisa wezvaunenge uchiwana. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye zvingangoita zvidzikiso.
Iyo Yoga 710 14 uye 15 inopa yakasimba specs yemari, kusanganisira yakatsaurwa Nvidia mifananidzo, uye yakareruka kupfuura mamwe akawanda malaptop mumakirasi avo.
Chekupedzisira mune dzino dzakateedzana ndiyo hombe 15-inch sarudzo, iyo Yoga 710 15, iri rakanyanya kunaka rakanyanya vhezheni yeiyo Yoga 710 14, iine iwo chaiwo ma specs, asi iyo 15.6-inch skrini. Iyo inorema 4.2 lbs, inova yakajeka yekushandurwa mune iyi saizi-renji, uye haina kuwana chikamu cheNumPad pane iyo keyboard, asi makiyi akadzoserwa kumashure.
Iyo Yoga 710 15 inowanikwa zvakare isina mifananidzo yakatsaurirwa, ine hwaro hweCore i5 mamodheru anotangira panenge pamadhora mazana manomwe, nepo maratidziro eNvidia GT 750MX achitanga pamadhora mazana mapfumbamwe. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko.
Mahwendefa: HP Specte X2, Samsung Galaxy Tab Pro S nevamwe
Nepo akawanda anotendeuka mune ino runyorwa ari malaptop ane 360-degree anotendeuka echiratidziro, kune zvakare zvishandiso mashoma ayo ari kunyanya mapiritsi uye anoshanda semalaptop kana akasungirirwa kumusoro kune avo ekumisikidza zviteshi kana keyboard keyboard, seMicrosoft Surface Pros uye iyo Asus Transformer 3s inotaura muchikamu chakapfuura. Izvo hazvisi izvo chete hazvo, kune mamwe akati wandei mamwe maitiro akanaka atichataura pazasi. Ingo ramba uchifunga kuti izvi zvinotakurika uye zvakakura zveinki, kutora manotsi kana kudhirowa nemapeni anoenderana, asi uchishaya IO, hupenyu hwebhatiri uye kuita kwakasiyana kunopihwa nezvimwe fomu-zvinhu.
The HP Specter X2 ndiye wandinofarira weboka iri uye iwe ucha tsvaga nei nei kubva pakuongorora kwedu. Uyu anowana iwo maficha uye zvesimba mune yakanaka chaiyo aluminium muviri. Inosanganisira 12-inch screen ine anoshanda digitizer, Skylake Core m Hardware, 42 Wh bhatiri, yakanaka keyboard doko ine backlit makiyi uye ane hunhu IO. Iyo zvakare inorema kutenderedza 2.7 lbs nedoko.
Shanduro dzakakwidziridzwa dzakakwirira dzinodhura ($ 800 zvichikwira), asi iyo Core m3 modhi ine 4 GB ye RAM uye 128 GB yekuchengetedza SSD inoenda pasi pemadhora mazana matanhatu mazuva ano (iwe uchaona kubva pano). Iyo keyboard dock inosanganisirwa pane ese mamodheru, nepo peni inosanganisirwa pane kumwe kumisikidza, asi chishandiso chiri kuzoshanda nemapeni mazhinji saka hapana chaicho chikonzero chekutenga iyo HP imwe.
Imwe sarudzo inonakidza ndeye Samsung Galaxy Tab Pro S. Iri rakatetepa uye rakareruka (1.72 lbs yeslate, 2.35 yeslate uye keyboard), yakavakirwa paCore m Hardware, inowana 12-inch AMOLED kuratidza uye 40 Wh bhatiri. Iyo mhando yekuvaka yakanaka, kunyangwe iyo yekumashure ichigadzirwa kubva mupurasitiki. Ichi chishandiso chinongowana imwechete USB Type-C chiteshi kunyange, kusiyana neSpecter iyo inowana maviri.
Imwe imwe yekusanzwisisika kweTab Pro S kushaikwa kwekickstand, zvinoreva kuti uchafanirwa kuibata, kana kuishandisa nekibhodhi folio iyo inongobvumira yakatarwa skrini yekurerekera. Chimwe ndechekuti hazvisi kuzoshanda nema styluses. Samsung yakavimbisa chinowirirana Pen nguva yadarika, iyo isati yawanikwa, saka panguva ino unogona kuwana chimwe chinhu senge iyo Bambook Fineline 2 chinyoreso. Kunze kweizvi, iyo keyboard iri kurerekera uye inonzwa kunge yakachipa, saka kuishandisa pamakumbo ako kunenge kusinganzwisisike.
Kunyangwe paine kusagadzikana, iyo Tab Pro S ndeyeyese inotakurika slate iyo inopa kuita kwakanaka uye yakasarudzika skrini. Iyo $ 900 mutengo weiyo base dhizaini yakaoma kumedza, asi iwe uchadaro tsvaga iyi inodhura pamhepo.
Iyo Samsung Tab Pro S ine ayo akasarudzika, asi neimwe nzira yakasarudzika Windows slate
The Dell Latitude 13 7000 iri 13-inch bhizinesi inowoneka zvakare yakavakirwa pane isina faniro Core M chikuva.
Iyo yekumira-yega slate inorema 1.9 lbs uye inosanganisira 13.3 inch FHD IPS yekubata yegirazi nerutsigiro rweWacom peni, kunyangwe peni isina kuiswa mupakeji. Iyo keyboard dock iri, uye kana ikabatanidzwa pamwechete zvikamu zviviri zvinogadzira 3.7 lbs laptop. Chikamu chehuremu chiri kukonzerwa neyekuwedzera 20Wh bhatiri mukati mechiteshi, pamusoro peiyo 30 Wh imwe yakanyura mukati mehwendefa pacharo.
Dell anotengesa chishandiso ichi kunyanya kune vashandisi vemakambani uye nekudaro inopa vPro inogoneswa masisitimu uye hombe suite yezvinhu zvinoenderana. Dudzira zvese izvi, iyo Latitude 13 7000 haina kudhura, sezvo vhezheni vhezheni ine Core m5 processor ine MSRP ye $ 599.
Latell Latitude 7000 inotengeswa sebhizinesi 2-in-1
The Toshiba Portege Z20t ndeimwe Core M inogadziridzwa piritsi ine doko rinonamira. Icho chakanyanya kuumbika uye chakareruka zvishoma ipapo iyo Dell (3.3 lbs yetablet + dock), kazhinji nekuti inowana diki 12.5-inch kuratidzwa, isina-kupenya kurapwa uye inoshanda digitizer ine peni rutsigiro. Pamusoro peizvozvo, yechipiri Wacom digitizer yakasungirwa mupakeji, kana iwe uchida kunyatsozivikanwa kwepeni.
Iyo yekumisikidza unit inosanganisira yakakura keyboard, yakasimba IO uye 36 Wh bhatiri, padivi peimwe 36 Wh bhatiri mukati mehwendefa, uye ikasanganiswa iwo maviri anozopa nyore 10+ maawa ekushandisa kwemazuva ese pamubhadharo.
Toshiba's Portege Z20T haina kuuya yakachipa hazvo, ine base base modhi inotangira pa $ 999, asi kana iwe uchida inokwanisa uye inogara-nguva bhizinesi chigadzirwa, iyi inogona kunge iri yako.
Iyo Toshiba Portege Z20t inoenderana uye inorongedza mabhatiri makuru maviri, asi mutengo wayo wepamusoro unogona kudzora chero munhu asiri mubhangi kure
Kune zvimwe zvishandiso zvimwe zvatisiri kusanganisa pano nekuda kwekutarisa zvisirizvo zvevatengi, kunyangwe zvavo vachirumbidza kubva kunhau. Pakati pavo, pane iyo Dell XPS 12 9250, ivo Lenovo Miix 700 kana iyo Huawei Matebook. Zviongorore pachako kana uchifarira zvimwe zvakawanda, uye pinda mukubata muchikamu chemashoko kumagumo kwenyaya kana uine mibvunzo nezvazvo.
Asus Shanduko Bhuku Flip uye Vivobook Flip akateedzana
Kune akatiwandei mamodheru akaverengerwa mune dzino dzakateedzana, ane masikirini masikisi anotangira kubva pa11.6 kusvika ku15.6-inches. Hatisi kuzonyora ese aripo mamodheru, nekuti kune vakawanda kunze uko uye Asus's yekupa zita mutemo iri kuvhiringidza.
Ini ndichakuudza iwo maFlips anowanzo ari epakati-renji anotendeuka nemitengo yakasimba uye maficha. Iyo 13 uye 15-inch vhezheni yakavakirwa paIntel Broadwell uye Skylake Core U Hardware, ine akasiyana huwandu hweyeuchidzo nekuchengetedza. Mazhinji acho anowana IPS skrini uye mamwe anotosanganisira akatsaurwa maficha, kazhinji Nvidia GT 940M machipisi. Semutemo wenguva dzose, mamodheru ane mifananidzo yeNvidia anowana zvirevo zveTD, LT kana UB mushure mezita rakateedzana (semuenzaniso: TP500TD, Q503UB), nepo iwo asina mifananidzo yakatsaurwa achipedzisa muLA kana UA (mienzaniso: TP501UA)
Sezvo aya asiri ekutanga makomputa, iwe unofanirwa kutarisira kuita mamwe ekutengeserana kana uchienda kwavari. Semuenzaniso, iyo mhando yekuvaka yakanaka, asi haina kunaka, mapurasitiki anoshandiswa kune mamwe mativi emakesi, makibobhodhi anoshaya kumashure-mheni pane kumwe kumisikidzwa uye nevamwe. Iyo yakanakisa mitengo inowanzo kubhadhara izvi zvese uye ndeimwe yezvikonzero izvi mabhuku eAsus anozivikanwa.
Iwe unofanirwa kutevera iyi link kune rumwe ruzivo pane iyo 13-inch Shanduko Bhuku Flips uye iyi yemamodeli e15-inch.
Iine Macbook yayo senge muviri uye mutengo unodhura, iyo Transformer Book Flip TP300 ndeimwe yeakanakisa epakati-renji anotendeuka kunze uko
Lenovo Yoga Flex mitsara
Aya maLenovo anonyanya kudhura 2-in-1s, uye chizvarwa chazvino mune akateedzana ndiwo maFlex 4 mamodheru, asi echinyakare Flex 3s akakodzerawo kutariswa.
Iyo Flex 4s inowanikwa mune gumi nemana uye 14-inch akasiyana, kutanga kutenderera madhora mazana mashanu (uye kuenda kushoma online). Shanduro dzese dzinopa Intel Skylake Core U Hardware, ine iwo masisitimu emhando anotora maCore i3 processor, 4 GB ye RAM uye HDD yekuchengetedza, nepo iwo ekupedzisira magumo anogona kuve akaumbika neanokurumidza maCPU, mamwe RAM nemaSSD. Zvese zvakare zvinowana backlit keyboards, FHD IPS touchscreens uye 52.5 Wh mabhatiri.
Iyo yekuvaka mhando kune rimwe divi ingori yepakati, nepurasitiki ichishandiswa kumakesi uye chassis, uye aya maFlex ultraportable akaenzana zvakakora uye anorema - 3.9 lbs e14-incher uye 4.6 lbs yeiyo 15-inch modhi. Zvimwe kunze kweizvozvo, kana iwe uchida yakapusa uye isingadhuri komputa ine chinoshandurwa kuratidzwa, aya maLenovos ndiwo sarudzo aunofanirwa kufunga nezvawo.
Kana iwe uri mushure mezvakareruka uye zvisingadhuri zvinoshanduka zvine Hardware Hardware uye yakanaka yakazara specs, iyo Lenovo Flex mamodheru anofanirwa kunge ari pane ako runyorwa
HP Shanje uye Pavilion x360 mitsara
Mitsetse yeHP yepakati-renji inoshandurwa inosanganisira iyo Shanje uye Pavilion akateedzana. Kazhinji mhando dzeGodo idanho rinokwira kubva kumaPavilion, ayo anotarisa vatengi vane tarisiro yebhajeti, asi mune izvi vaviri vacho havapindane, zvirinani panguva yepositi iyi.
Uye imhaka yekuti kana iwe uri mushure meiyo 13-inch unit uchafanirwa kutarisa iyo HP Pavillion x360 13t, chishandiso chakavakirwa pa Skylake Core U Hardware, ine 48 Wh bhatiri uye FHD IPS skrini. Mhosva yacho yakanyatsogadzirwa nepurasitiki yakatsetseka, inowanikwa mune akati wandei mavara uye iri kurema pa3.8 lbs, nepo iyo keyboard haina kudzoserwa kumashure, chinova chinhu chaungakwanise kugamuchira kubva kumakomputa anowanzo kuve anodhura kupfuura mamwe 13-inch inoshanduka, kutanga panosvika madhora mazana mashanu. Tevedza iyi link ye mode mamiriro.
Iyo Pavillion X360 inodhura uye inopa iwo chaiwo maficha, asi yakakura kupfuura dzimwe sarudzo uye inoshaya backlit keyboard.
Kana iwe uri mushure meiyo izere-saizi inoshandurwa ine 15.6-inch kuratidza, HP inopa iyo yakawanda premium Envy x360 15t, ine metallic kuvaka uye backlit keyboard, pakati pevamwe. Iyo inorema 5.1 lbs hazvo, izvo zvinoita kuti ive inorema kune inoshandurwa, kunyangwe kana sarudzo mune zvigadzirwa yakanaka.
Unogona kuwana kabhuku aka neFHD IPS skrini, Intel Skylake Core U Hardware, yakasarudzika Nvidia GT 930M mifananidzo chip, 8-16 GB ye RAM uye 48 Wh bhatiri, uye masisitimu ane AMD A12 processor uye Radeon mifananidzo iripowo.
Pakazara, Shanje x360 15t iri kunyanya mune iyi runyorwa nekuti yakavakwa zvakanaka uye inotengesa zvakachipa, zvikasadaro yaisazokwikwidza kukwikwidzana neayo 15-inch 2-in-1s ayo anopa zvirinani specs kana akareruka. Iyo Core i5 modhi ine 8 GB ye RAM uye HDD yekuchengetedza inotengesa madhora mazana matanhatu. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko.
Iyo HP Envy x360 15t isarudzo yekufunga kana iwe uchida isingadhuri 15-inch inoshandurwa ine premium inotaridzika uye yakadzikama specs
Aya ndiwo akanakisa anotendeuka ultrabooks aunogona kuwana muzvitoro izvozvi. Zvimwe zvinotangwa mwedzi wega wega, saka gara wakatarwa, ndiri kugara ndichivandudza rondedzero, ndichiwedzera zvigadzirwa zvitsva pavanorova muzvitoro uye vachirasa izvo zvapera kushanda.
Panguva ino, kana iwe uchifarira iyo inotakurika laptop, iwe unofanirwa zvakare kuongorora yangu runyorwa rwe iyo yakanyanya ultrabook yenguva yacho, sarudzo yangu ye yakakurudzirwa Chromebook uye pamwe urwu rumwe runyorwa rwe dzimwe nzira dzinodhura kune avo vako pabhajeti repasi.
Kudhirowa mutsetse pa2-in-1 malaptop, zvakaoma kutaura kuti mamwe mamodheru ari nani pane mamwe, sezvo iwo akasiyana uye achigadzirisa zvakasiyana zvinodiwa. Zvimwe zvacho zvinonakidza kupfuura zvimwe zvakadaro. Semuenzaniso, iyo HP Specter X360 yakakurisa kutenderera, kana uine madhora zviuru zana ekushandisa, iyo Zenbook UX1000 yakasarudzika yepakati-renji sarudzo, iyo Microsoft Surface Pro inopa kuita mune compact uye yakajeka ganda, iyo Lenovo ThinkPad X360 Yoga neToshiba Portege Z1t isarudzo dzakanaka dzebhizimusi, nepo Dell Inspiron 20 11 kana iyo HP Pavilion X3000 360 iri kutenga kukuru kana iwe usingade kushandisa yakawanda.
Pakupera kwezuva zvakadaro, iwe unonyatso ziva zvaunoda kubva kune yako inotevera komputa uye nemari yauri kuronga kushandisa pairi, ndosaka danho rekupedzisira riri rako rese. Kana iwe uchida rumwe rubatsiro kusarudza, kana iwe ukaona chero chigadzirwa chitsva chisina kuiswa muno kana kana iwe uchingova nechimwe chinhu chekubvunza kana kuwedzera kune ichi chinyorwa, usazeze kushandisa chikamu chemashoko pazasi. Ini ndiri padhuze uye ini ndichapindura nekukurumidza sezvazvinogona.
Uye usati waenda, ramba uchifunga kuti zvinyorwa zvakadaro zvinotora maawa asingaverengeke ebasa, saka kana iwe uchikoshesa mhedzisiro, ita shuwa yekuratidza iyi link kune shamwari dzako uye gara uchitenderedza kuitira ramangwana.
HP Chromebook x360 14 G1 ongororo: Iyo hofori, ine simba inoshandurwa isingadiwe nevanhu vazhinji
Yakanakisa maabookabooks uye anotakurika malaptop mu2020 - yakazara kutenga gwaro
Filed Under: maitiro ekugadzirisa usb drive application haina kuwanikwa windows 7